महिलाहरुले महिनावारीका समयमा प्रयोग गर्ने स्यानेटरी प्याडभन्दा फरक कप अहिले बजारमा आएको छ। विभिन्न संघसंस्थाले विदेशबाट यो कप नेपाली बजारमा ल्याएका छन्।
धेरैजसो शहरीया महिलाले यसको प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्। लामो समयदेखि प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएकी चिकित्सक अरुणा उप्रेती भने यो कप नेपाली महिलाको लागि उचित नभएको बताउँछिन्। महिनावारी कप किन उपयुक्त छैन ? भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर डा. उप्रेतीसँग काठमाडौंप्रेसले गरेकाे कुराकानीः
अहिले बजारमा महिनावारी कप निकै चर्चामा छ, तपाईं चाहिँ यसको प्रयोग गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, किन?
हो, पछिल्लो समय नेपाली बजारमा यसको धेरै चर्चा परिचर्चा भएको सुनेकी छु। पत्रपत्रिका, अनलाइनलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको प्रचारप्रसार भएको छ। तर, मलाई त्यो पटक्कै मन परेको छैन। म यो कप नेपाली महिलाहरुले प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु, यसको विरोध गर्छु।
यो कप कुनै व्यापारीलाई पोस्न मात्रै नेपाल भित्रिएको हो। नेपाल जस्तो प्रजनन स्वास्थ्यमा अझै जनचेतना फैलाउनु पर्ने अवस्थामा रहेको देशका लागि काम छैन। नेपाली महिलाहरुको स्वास्थ्यका लागि यसले राम्रो गर्दैन।
के कारणले यो नेपाली महिलाका लागि उपयुक्त छैन?
म नेपाली महिलाबारे निकै लामो समयदेखि जानकार छु। देशका ६१ भन्दा बढी जिल्लामा पनि पुगेकी छु। महिलाहरु आफ्नो शरीरप्रति कति जानकार छन् भन्ने कुरा नजिकबाट देखेकी छु। यो कप समग्र महिलाको हकमा भन्ने हो भने नेपालमा कामै लाग्दैन। यसको कुनै काम पनि छैन। धेरैजसो महिलालाई महिनावारी हुँदा रगत बग्ने र पिसाब फेर्ने ठाउँ अलग–अलग हो भन्ने थाहा छैन। कति जनालाई त पाठेघरको मुख कहाँनेर हो भन्ने समेत थाहा हुँदैन।
महिनावारी हुँदा विभिन्न समस्या हुन्छ। तर किन हुन्छ? भन्ने पनि उनीहरुलाई थाहा हुँदैन। पाठेघर र मष्तिष्कको सम्बन्ध के हुन्छ? भन्ने पनि थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी महिलाले यो कप शरीरभित्र घुसाउने? महिलालाई आफ्नो अंगमा पिसाब फेर्ने र रगत बग्ने अलग–अलग ठाउँ छन् भन्ने नै थाहा छैन भने त्यो कप बेरेर कसरी पाठेघरको मुखमा राख्न सक्छन्?
कप राख्न नजाने पाठेघरमा कस्तो असर पर्छ?
शरीरभित्र कुनै पनि बाहिरी कुरा पठाउनुलाई म राम्रो मान्दिनँ। महिलाहरुले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेनन्, किटाणुरहित राख्न सकेनन् भने त्यसले त पाठेघरको नलीमा झन् समस्या पार्छ। यसैपनि महिलाहरु महिनावारी हुँदा सामान्य सचेतना अपनाउन नसक्दा इन्फेक्सन हुने जोखिममा छन्।
महिलाको यौनाङ्गमा कुनैपनि सुगन्धित साबुन, प्रफिम प्रयोग गर्नु हुँदैन भनिरहेको बेला यो कप लगेर यौनाङ्गमा राख भन्ने कुराको म विरोध हुँ। पहिले महिलाको शरीरभित्र आयुडी, कपर्टी, परिवार नियोजनका साधन राख्ने गरिन्थ्यो। यसले पनि धेरै महिलाहरुमा समस्या आएको हामीले देखेका थियौं। परिवार नियोजनका साधनमै पनि इमरजेन्सी पिलहरु बढी प्रयोग गर्दा यसले क्यान्सर हुनसक्ने भनेर स्त्रीरोग विशेषज्ञले नै भन्छन्। यस्तो किसिमको कपबाट संक्रमण भयो भने कसले रोक्ने?
अर्को कुरा, यो गाउँघरमा गएर प्रयोग गर्न लगाए भने त खतम नै हुन्छ। यसको प्रयोग गर्न नजान्दा महिलामा बाँझोपनको समस्या हुन सक्छ।
नेपालका सबै महिला आफ्नो शरीरबारे अनविज्ञ छन् त?
हैन, कतिपय शहरबजारका सचेत महिलाहरु जानकार होलान्। शरीरप्रति जानकार भएका, ज्ञान भएका कुनै महिलाले प्रयोग गर्न सक्छन्। तर, यसले समग्र महिलाको लागि राम्रो हुँदैन।
साधारण रुपमा महिलाहरुमा हुने महिनावारीलाई व्यवस्थापन गर्न सुतीको स्यानेटरी प्याड प्रयोग हुन्छ। यो निकै राम्रो हो। अहिले कतिपय ठाउँमा वनस्पतिबाट पनि प्याड बनाउने चलन सुरु भएको छ। वनस्पतिको प्याड प्रयोग गर्न सकियो भने यसलाई डिस्पोजल गर्न सजिलो हुन्छ। कतिपयले घरेलु प्याडहरु प्रयोग गरिरहेका छन्। बरु, यो विषयमा चर्चा परिचर्चा धेरै हुनुपर्छ।
बजारमा पछिल्लो समय कपकै माग बढेको सुनिन्छ नी !
नेपालको सन्दर्भमा महिनावारी कप काम लाग्दैन। महिलाको स्वास्थ्यमा राम्रो हँुदैन। टिचिङ अस्पतालमा काम गर्ने मेरो डाक्टर साथी छिन्। उनी आफैले कप प्रयोग गर्न नजानेको कुरा मसँग भनेकी छिन्।
अहिले उनी आफूमात्रै हैन, आफ्ना छोरीहरुलाई पनि कप प्रयोग नगर्न भन्दै आएकी छन्। एउटा डाक्टर, जसलाई आफ्नो शरीरबारे जानकारी हुन्छ र त कप प्रयोग गर्न जान्दैनन् भने सामान्य मानिसले कसरी प्रयोग गर्ने? उनीहरुलाई त आएन भने अरु महिलाको हकमा के होला? यो कप विशुद्ध व्यापाकिर प्रयोजनका लागि मात्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपाल प्रवेश गराएका हुन्।
भनेपछि संघसंस्थाको कमाइखाने भाँडो मात्रै हो यो कप?
यही नै हो भन्ने ठोकुवा गर्दिनँ। तर, त्यस्तै हो कि झै लाग्छ। यो विषयमा किन सरकारले वास्ता गरेको छैन? स्वास्थ्य मन्त्रालय किन चुप छ? अहिले त १२ वर्षकै नानीहरु महिनावारी हुन्छन्। १३-१४ वर्षका किशोरीलाई कप प्रयोग गर भन्ने हो?
कपकै कारण संक्रमण भए जिम्मा कसले लिने? नेपालमा केही वर्ष पहिले महिलाका लागि कण्डम आएको थियो। यसमा नेपाल सरकारले नै धुमधामसँग प्रचार गरेको थियो। मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ–यो काम लाग्दैन। महिलाहरुले प्रयोग गर्न नै जान्दैनन् भनेर। केही महिना चर्चा परिचर्चामा रहेको कण्डम अहिले हराएर गयो।
त्यसैगरी यो महिनावारी कप पनि एक दिन हराएर जान्छ। यो नेपाली महिलाका लागि काम लाग्दैन। म भर्खरै भारतमा गएर आएँ। भारतका महिलाहरुसँग पनि कुराकानी गरे। उहाँहरुले पनि हामीहरुले हाम्रो कार्यक्रममा यसको प्रयोग नै गर्न दिँदैनाैं भन्नुभएको छ।
प्रजनन स्वास्थ्यको विज्ञका रुपमा तपाईं यो कप प्रयोग नगर्न सल्लाह दिनुहुन्छ?
हो। मैले चिनेको मान्छे सबैलाई प्रयोग नगर नै भन्छु। यदि अन्य ठाउँमा यो घुसाइदियो भने के हुन्छ? महिलाको शरीरमा ५÷६ घण्टासम्म त्यो कपभित्र शरीरमा रहनु स्वस्थकर होइन। त्यसैले म यो कप प्रयोग गर्न हुन्न भनेर विरोध गरिरहेकी छु।
राम्रो हुन्छ, कसैले भन्छ भने त्यो उसको कुरा हो। उनीहरुलाई प्रयोग नगर भन्ने अधिकार मसँग छैन। तर, मलाई चिनेको, मैले चिनेका महिला, किशोरीलाई कप प्रयोग नगर भन्ने सल्लाह दिन्छु।
त्यसो भए महिनावारीका बेला सबैभन्दा उत्तम के हो?
हामीले महिनावारी स्वच्छता दिवस मनाउँदा पनि प्याडको राम्रोसँग प्रयोग गर्नुपर्छ नभए संक्रमण हुन्छ भनिरहन्छाैं। हामीले सुती कपडा प्रयोग गर्ने हो कि त बजारमै पाइने प्याडहरु प्रयोग गर्ने हो।
कप त पाठेघरबाट निस्केको रगत त्यसमा जम्मा होस् भनेर महिलाको यौनीबाट भित्र पठाउने कुरा हो। पछि बाहिर निकाल्दा समस्या हुनसक्छ। आफ्नो शरीरबारे आफैलाई ज्ञान नभएको मान्छेले कसरी प्रयोग गर्ने? यसले गर्दा स्वच्छ रुपमा सफा सुतिको कपडा स्यानेटरी प्याड प्रयोग गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम हुन्छ।
Published Date: Wednesday, 11th September 19:06:42 PM